'स्लिप प्यारालाइसिस'ले सताइएका फोटोग्राफरको अनुपम कला ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘स्लिप प्यारालाइसिस’ले सताइएका फोटोग्राफरको अनुपम कला !
तपाईलाई दुइवटा प्रश्न सोधौं ? तपाईलाई पिडा छ ? तपाइँ सजिलै छ भन्नु हुदैन । ‘होइन, ठिकै छ ।’ तपाइको उत्तर हुन्छ । यदि तपाई ठिकै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अर्को प्रश्न सोधौं ? तपाइँ आफूलाई कतिसम्म दुखित तुलाउन सक्नुहुन्छ ? तपाइँसँग यसको उत्तर नहुन सक्छ । तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो प्रश्न गरेको ? मान्छे आफूलाई पिडामा पार्न कहिल्यै चाहदैन। हो, तपाई सहि हुनुहुन्छ ।कोहि पनि व्यक्ति आफूलाई जानीजानी पिडा दिन चाहदैन ।
अझै अर्को प्रश्न पनि गरे । तपाई खुसि हुनुहुन्छ ? तपाई खुलेआम म खुसि छु भन्न सक्नुहुन्न । ‘ठिकै छु, खुसी त के भन्नु ?’ तपाईको उत्तर केहि यस्तै हुन् सक्छ । तपाइँलाई पिडा पनि छैन । तपाइँ खुसि पनि हुनुहुन्न । यो कसरी सम्भव छ ?
हो, यसको सजिलो उत्तर हो – तपाई आफूलाई दुखित बनाउँदै हुनुहुन्छ । बाहिरी चोटपटक र रोगव्याधी बाहेक पनि व्यक्ति दुखित हुन पुग्ने विभिन्न कारणहरु छन् । त्यस मध्येकै एक हो – सपना पनि ।
सबैभन्दा असल मान्छेमा हुने सबैभन्दा खराब गुण के हो ? यहि हो कि ऊ आफूलाई सकभर दु:ख दिइरहेको हुन्छ । खराब मान्छे अरुलाई दुख दिन्छ र आफू खुसि हुन्छ। तर असल मान्छे आफैलाई दुख दिएर अरुलाई खुसि पारिरहेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय केहि यस्तै घटना घटेको छ । निकोलाज ब्रुनो ७ वर्षको हुँदा देखि नै ‘स्लिप प्यारालाइसिस’को शिकार बन्न पुगे । जब उनी पन्ध्र वर्षको पुगे, यसले उनलाई हर रात दुख दिन थाल्यो । बेचैनी र छटपटीले हरेक रात सतायो । पसिना पसिना भएर उनी हर मध्यरात व्युझीरहें । बिहान उठ्दा उही दिग्दारी र हैरानीमा टाउको समाए । र बाहिरफेर निस्कदा हरबखत सतर्क हुन् थाले ।
आफ्नो खराब सपनाको शृंखलालाई उनले फोटोग्राफी मार्फत देखाउने जमर्को गरेका छन् । उनले सपनाको हरेक चिजवस्तुहरुलाई वास्तविक रुपमा पनि उसैगरि ‘डिकोड’ गरेका छन् । “पानी मेरो कामको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हो । पानी मुनी हुनु भनेको अनिद्राको अवस्था हो । र पानी माथि हुनु भनेको निद्रा भङ्ग भएपश्चातको अवस्था हो । यो अवस्था नै मैले भोग्दै आइरहेको भयावहता हो ।”, उनी अझ थप्छन, ” यसैकारण मैले सुत्नु अगाडी र व्युझीएपछी नै पानीलाई आफ्नो जीवनबाट पन्छाउन सकिन ।”
उनी यो फोटो तयार पार्नको लागि आफूले निकै मिहेनत गरेको बताउँछन् । ब्रुनोले ट्राइपड उठाएर एक ठाउँमा फिक्स्ड गरे । लगातार शुट लिए । इन्टरभलको समयमा उनी लुगा चेन्ज गर्दथे। र प्रप्स(Props) मुभ गर्दथे । यसपछी उनले एकएक फोटोलाई जोडे । र आफ्नो भयावह सपनालाई एक फोटो मार्फत देखाउन सफल भए ।